सूर्य ग्रहण हेर्ने उत्तम तरिका सूर्यविम्बको प्रतिविम्ब बनाइ छाया हेर्नु हो-खगोलविद् आचार्य – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/सूर्य ग्रहण हेर्ने उत्तम तरिका सूर्यविम्बको प्रतिविम्ब बनाइ छाया हेर्नु हो-खगोलविद् आचार्य
सूर्य ग्रहण हेर्ने उत्तम तरिका सूर्यविम्बको प्रतिविम्ब बनाइ छाया हेर्नु हो-खगोलविद् आचार्य
काठमाडौं- आउँदो विहीबार सूर्यग्रहण लाग्दैछ । सूर्य ग्रहण नेपालबाट खण्डग्रास सूर्यग्रहण मात्र देख्न सकिनेछ ।
यस ग्रहणलाई मलेसिया, सिंगापुर, श्रीलंका, तमिलनाडु, ओमान, युनाइटेड अरव इमिरेस्ट आदि ठाउँहरुबाट वलय सूर्यग्रहण देख्न सकिन्छ ।
जापान, कोरिया, ताइवान, हङकङ, भियतनाम, कम्वोडिया, थाइल्याण्ड, लावोस, म्यानमार, भुटान, नेपाल, लासा, ताजकिस्तान, अजरवैजान आदि मुलुकबाट भने खण्डग्रास सूर्यग्रहण मात्र देखिन्छ ।
सूर्यग्रहण नेपालमा विहान ८ बजेर ४३ मिनेटबाट शुरु भई ११ बजेर ३१ मिनेटमा समाप्त हुनेछ । विहानको १० बजेर २ मिनेट जाँदा सूर्यलाइ हामीहरुले करीब ३७ प्रतिशत ढाकेको देख्दछौं भने उक्त समयमा वातावरणीय तापक्रम घटेर चीसो अनुभव सबैले महशुस गर्नेछन् ।
के हो सूर्य ग्रहण ?
सौर्यमण्डलका सम्पूर्ण ग्रहहरूजस्तै पृथ्वी पनि आफ्नो कक्षमा पश्चिमबाट पूर्वतिर र सूर्यको वरिपरि पनि परिभ्रमण गरिरहेको हुन्छ यसै क्रममा पृथ्वी र सूर्यबीच चन्द्रमाको छायाँ पर्दा सूर्यग्रहण देखिन्छ।
सूर्य र चन्द्रको अवस्था सूर्य चन्द्रमाभन्दा करिब चारसय गुना ठूलो र त्यति नै परिमाणमा टाढा रहेको छ। यसैकारण पनि पृथ्वीबाट हेर्दा सूर्य र चन्द्र लगभग उत्रै देखिन्छ। जब चन्द्रमा, पृथ्वी र सूर्यको बीचमा पर्छ तब, चन्द्रमाले सूर्यलाई छेक्छ।
यसबेला पृथ्वीका मानिसले आंशिक वा पूर्णरूपले सूर्यलाई देख्न सक्दैनन्। यस्तो प्रक्रिया सूर्यग्रहणमा विपरीत दिशामा रहेको सूर्यलाई आफ्नो मार्गबाट गइरहेको चन्द्रमाले छेक्ने हुनाले यो ग्रहण छोटो समयको लागि मात्र हुने गर्दछ
कुन राशिका लागि उत्तम ?
ग्रहणका समयमा के गर्न हुने के गर्न नहुने भन्ने विषयमा ज्योतिष शास्त्रमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ ।
यदि धर्मशास्त्रमा विश्वास गर्ने हो भने यो सूर्यग्रहण कर्कट, तुला, कुम्भ तथा मीन राशीभएका मानिसले मात्र हेर्न हुन्छ । तथापि वैज्ञानीकहरु भने सूर्यग्रहण जो कोहिले सुरक्षित तरिका अपनाएर हेर्न हुने मान्दछन् ।
साधारण मानिसका लागि ग्रहण एउटा अनौठो तथा असाधारण घटना हो भने खगोलविद्हरुका लागि यस्तो घटना आफ्नो गणित जाच्ने सुनौलो अवसर हो ।
वैज्ञानिक तथा खगोलविद्हरु सूर्य चन्द्र तथा पृथ्वीको सहीदूरी मापन गर्न ग्रहणको उपयोग गर्दछन् भने हाम्रा साना नानीवाबुहरुका लागि भने विज्ञानमा रुची पैदा गराउन यस्ता घटनाहरु उपयोगी हुने गर्दछन् ।
सूर्य ग्रहण कसरी हेर्ने ?
सूर्यग्रहण हेर्न चाहने जो कोहीलाई तक्षशिला एष्ट्रोनोमिकल क्लबले सामाखुशीस्थित तक्षशिला कलेजको छतबाट सुरक्षित तरिकाबाट ग्रहण हेर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।
चन्द्रग्रहण हेर्दा हाम्रो आँखामा कुनै असर गर्दैन भने सूर्य ग्रहण हेर्दा अत्यन्तै सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ । मानिसको आँखा अत्यन्तै संवेदनशील हुन्छ ।
धार्मिक समुदायका मानिसहरु ग्रहणका वेला दान दक्षिण गर्दा विशेष फलमिल्ने विश्वास गरी दान दिने नदी तट वा गंगामा गई ग्रहणको स्नान गरी सुद्द हुने गर्दछन् ।
तान्त्रिकहरु आफ्नो मन्त्र सिद्घ गराउनका निमित्त ग्रहण लागेका वेला अत्यन्तै उपयुक्त मान्दछन् र मन्त्रको साधना समेत गर्दछन्
ग्रहण सम्बन्धि अन्धविश्वास संसारभरी नै रहेका पाउन सकिन्छ । रोमनहरु ग्रहणका वेला चिच्याउने गर्दछन् भने चीनमा ग्रहण र ड्र्यागनसगको सम्बन्धमा विश्वास गर्ने गर्दछन् ।
प्राचीन मिश्रका राजा आफै सूर्यवंशी थिए उनी सूर्यग्रहणका वेलामा आफ्नै शहरको मुख्य मन्दिरमा गएर मन्दिरको परिक्रमा गरिरहन्थे भन्ने कुराको इतिहास भेट्न सकिन्छ ।
(आचार्य सहप्राध्यापक तथा वरिष्ठ खगोलविद् हुन्)
छाेरीकाे माया जीवनकाे साया हाे, जसकाे घरमा छाेरी छिन्, त्याे घर पहिलाे स्वर्ग हाे !